उमेर नपुगी विवाह गर्नुको बेफाइदा मात्रै हैन फाइदा पनि हुन्छन ! – MediaNP
उमेर नपुगी विवाह गर्नुको बेफाइदा मात्रै हैन फाइदा पनि हुन्छन !
नेपालमा पछिल्लो समयमा बालविवाह अथात् कम उमेरमै विवाह गर्नु हुदैन् भन्ने विषयमा अंधिकाश मानिसहरु सचेत भएका छन् । विवाह करिब २० देखि ३५ वर्ष बिचमा गर्नुलाई उत्तम मानिन्छ । कम उमेरमै विवाह गर्नाले महिलाको शारीरिक तथा मानसिक रुपमा असर देखापरी बच्चाको समेत उचित विकासमा निकै असर पर्दछ । विशेषत अपरिपक्क उमेरमा के सहि, तथा के गलत भनेर छुट्याउन निकै गाहे हुनाले जे कुराको निर्णय अरुको भरमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले भविष्यमा आउने सम्भावित बेफाइदा र बेफाइदाको बारेमा आंकडा गर्न सकिदैन् ।
सामान्यतया १८ बर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई उमेर नपुगी गरिने विवाह हो । विभिन्न देशमा विवाह गर्न योग्य उमेर भनेर आ आफ्नै कानुनी रूपमा निर्धारण गरिएको छ । बालिकाको लागि १८ वर्ष भन्दा माथि र बालकको हकमा २० वर्ष भन्दा माथि विवाह गर्न उपयुक्त उमेर मानिदैन् । कानुनमा जे जस्तो कुरा उल्लेख भएपनि हिन्दुधर्मको संस्कार अनुसार कम उमरैमा वा बाल विवाह गर्नुलाई संस्कारको रुपमा लिइएको छ, तर आधुनिक समयमा यो निकै कम भइसकेको छ । कम उमेर विवाह गर्दा बेफाइदा मात्र भएर फाइदा पनि छन, जसलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१.कमउमेरमै गरिएको विवाहमा केटाकेटी लामो समयसम्म सगैं रहेने हुदाँ एक अर्कालाई सजिलै बुझ्न सक्ने कारणले एक अर्कालाई मन नपर्ने कुरा सजग हुन्छन् । २.कमउमेर देखिनै घरपरिवारको साथमा हुनेहुदाँ परिवार वा आफन्तसगँ घुलमिल गर्नमा समस्या उत्पन्न नहुने ।
३.आफ्नो परिवारलाई वा बच्चालाई अत्याधिक समय दिन सकिने ।
४.बच्चा जाडै पैदा भएमा उसको करियर पनि विशेष ध्यान दिन सकिनेछ ।
५.बच्चा र आफ्नो करियर सगैंअघि बढ्ने कारणले समयको बचत हुने ।